Puoduo သည် တတိယ သုံးလပတ် ရလဒ်များကို ကြေငြာ ခဲ့ပြီး အသုံးစရိတ် သည် စျေးကွက် မှ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သို့ ပြောင်းလဲသွား သည်နှင့်အမျှ ရေရှည်တည်တံ့ သော တိုးတက်မှု ကိုပြသ သည် – Pandaily
Puoduo သည် တတိယ သုံးလပတ် ရလဒ်များကို ကြေငြာ ခဲ့ပြီး အသုံးစရိတ် သည် စျေးကွက် မှ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သို့ ပြောင်းလဲသွား သည်နှင့်အမျှ ရေရှည်တည်တံ့ သော တိုးတက်မှု ကိုပြသ သည်
Nov 26, 2021, 21:00ညနေ 2021/11/29 12:23:50 Pandaily
စံချိန်တင် အချိန်တွင် သုံးစွဲသူ သန်း ၈၀၀ ကျော် ရရှိ ပြီးနောက် Puduo သည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးမှု လမ်းကြောင်း ကိုဖန်တီး နေ ပုံရသည်။
E-commerce startup က စက်တင်ဘာ လကုန် အထိ သုံး လတာ ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၂၁. ၅ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၃. ၃ ဘီလီယံ) ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ သုံးလပတ် ဆက်တိုက် အမြတ်အစွန်း ဖြစ်သည်။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၂ လအတြင္း ၎တို႔၏ ပလက္ ေဖာင္း မ်ားေပၚတြင္ ေအာ္ ဒါ ေပးသည့္ ေဖာက္ သည္ အေရအတြက္ သည္ ၈ ၆၇ ဒသမ ၃ သန္းအထိ ျမင့္တက္ လာခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳ သူ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။
သတိပြု သင့် သည်မှာ တတိယ သုံးလပတ်တွင် အရောင်း နှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကုန်ကျစရိတ် သည် တတိယ သုံးလပတ် ဆက်တိုက် ယွမ် ၁၀. ၁ ဘီလီယံ သို့ကျဆင်းသွားသည်။ R & D အသုံးစရိတ် သည် ၂၀၁၈ IPO နောက်ပိုင်း အမြင့်ဆုံး သို့တက် ခဲ့ပြီး ၃၄% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ယွမ် ၂. ၄ ဘီလီယံ အထိရှိသည်။
Poduo ၏ဥက္က chairman ္ဌ နှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Chen Lei က ကုမ္ပဏီ ၏တတိယ သုံးလပတ် ရလဒ်များကို ထုတ်ပြန် ပြီးနောက် “ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါး နှစ်က ရောင်းအား နဲ့ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကိုအာရုံစိုက် တာထက် R & D ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကိုပိုမို အာရုံစိုက် ပါတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Chen Guangcheng သည် လေ့ကျင့် ထားသော ကွန်ပျူတာ သိပ္ပံပညာရှင် ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဇူလိုင်လတွင် စီအီးအို အဖြစ်တာ ၀ န်ယူ ခဲ့ပြီး မတ်လတွင် ဥက္က chairman ္ဌ အဖြစ်တာ ၀ န်ယူ ခဲ့ပြီးနောက် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိုပိုမို အာရုံစိုက် ခဲ့သည်။ Puduo ၏ လတ်တလော နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာအရ ၎င်း၏ ၀ န်ထမ်း ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်သည် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုတွင်ပါ ၀ င် ကြသည်။
“ အင္ဂ်င္နီယာ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရဲ႕ ေလ့က်င့္ခန္း နဲ႔ ေနာက္ခံ သမုိင္း ေၾကာင္း ေတြအရ သုေတသန နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေပၚ အေလးထား မႈ ျမင့္တက္လာ ျခင္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရဲ႕ အားသာ ခ်က္ကို ရယူ “ ကျွန်တော် တို့ သည် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ် ပါဝင် ရေး ကြိုးပမ်း မှု ကို ပိုမို နက်ရှိုင်း စေ ရန် ကျွန်တော် တို့ ၏ နည်းပညာ အားသာချက် ကို အသုံးချ ရန် ဆန္ဒ ရှိ ပါသည် ။”
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့သော Puduo သည် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ sector ကို စီးပွားရေး မဟာဗျူဟာ ၏အဓိက ကဏ္ as တစ်ခုအဖြစ် ရှု မြ င်ပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွား ရေးတွင် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ more များပိုမို ထည့်သွင်း ခြင်းသည် ကုန်ထုတ် စွမ်းအား နှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ကိုမြှင့်တင် နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ကုမ္ပဏီသည် စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန် များ အတွက်ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၄၀ ကျော် ရောင်းချခဲ့သည်။
စိုက်ပျိုး ရေးတွင် Puduo သည် စိုက်ပျိုး သူများနှင့် စားသုံး သူများအတွက် လက်လှမ်းမီ မှု တိုးတက် စေရန်၊ ပိုမို တုန့်ပြန် သော ဖြန့်ဖြူး ရေး စနစ် ကိုတည်ထောင် ခြင်းအားဖြင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး စွမ်းရည် ညံ့ဖျင်း ခြင်း ပြ solve နာကိုဖြေရှင်း ရန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ ပြီး အထွက်နှုန်း ကောင်း သည့် စိုက်ပျိုး နည်း များကို တီ ထွ င်ရန် သိပ္ပံနည်းကျ စွမ်းရည် များကို အား ပေးသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Puoduo က Apple ထုတ်ကုန် ထောက်ပံ့ ငွေကို iPhone 13 စျေး နှုန်းကို ယွမ် ၅၀၀ အထိ လျှော့ချပေး သည်
ယခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ of ၏အဓိက လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း ရန် “ ၁၀ ဘီလီယံ စိုက်ပျိုးရေး အစီအစဉ်” ကို ကြေငြာခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပဏာမ ခြေလှမ်း ကို ကုမ္ပဏီ၏ အမြတ် ငွေ ဖြင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့ မည်ဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလတွင် ရှယ်ယာရှင် များက အတည်ပြုခဲ့သည်။ တတိယ သုံးလပတ် အမြတ်အစွန်း ကိုလည်း ဤ ပဏာမ ခြေလှမ်း သို့ ဖြန့်ဝေ လိမ့်မည်။
Tags ∗Pinduoduo | Agriculture | e-commerce platform | financial report | R&D
তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ফলাফল ঘোষণা করার জন্য অনেক প্রচেষ্টা করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে টেকসই বৃদ্ধির ফলে খরচ বেড়ে যায় বিপণন থেকে গবেষণা ও উন্নয়ন পর্যন্ত
রেকর্ড সময়ের মধ্যে 800 মিলিয়নেরও বেশি গ্রাহক পাওয়ার পর, অনেক প্রচেষ্টা টেকসই বৃদ্ধির পথ তৈরি করছে বলে মনে হচ্ছে।